Hakuna vanhu vanopinda muwanano zviri pamurairo, vorambana, vopinda mune dzimwe wanano
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Hakuna vanhu vanopinda muwanano zviri pamurairo, vorambana, vopinda mune dzimwe wanano
Hakuna vanhu vanopinda muwanano zviri pamurairo, vorambana, vopinda mune dzimwe wanano
VAROMA 7:2 Nokuti mukadzi unomurume wakasungwa nomurairo kumurume wake, iye achiri mupenyu, kana murume wafa wasunungurwa pamurairo womurume.
Sungano dzewanano dzinoti “kusvikira taparadzaniswa nerufu”. Rufu chete ndirwo rwunokwanisa kunyangaritsa sungano yewanano.
MARKO 10:11 Akati kwavari: Aninani unorasha mukadzi wake, akawana mumwe unoita vupombwe kwaari.
12 Vuye kana iye mukadzi akarasha murume wake, akawanikwa nomumwe unofeva.
Mavhesi maviri aya anojekesa kuti kana vanhu mangowanana zviri pamurairo, hapana pakati pemukadzi kana murume anofanira kuramba mumwe opinda zvakare muwanano.
Pakutanga kwaive naAdamu nemwenga wake, aidaidzwa kuti “mukadzi”.
Vaive vakapfekedzwa nekushonga kutsvene, saka havaiziva kuti vaive vakashama. Semudziyo mutsvene, Mwari akapa mukadzi humhandara. Ibasa rake kuhuchengetedza, kuti hapana murume anobata chibereko chake.
Mukadzi aifanira kuunza mwana anoberekwa nemhandara, Jesu. Aizokura, odaidza vatsvene vose kubva muguruva renyika. Mwana akarurama uyu aizova mimba yeMweya Mutsvene kuseri kwehumhandara hwake, akasununguka kubva kuchiitiko chekusangana pabonde.
Adamu nemukadzi vaive nehupenyu husingaperi mavari, asi hwaisakwanisa kuendeswawo kumwana nekusangana pabonde. Kusangana pabonde kunoburitsa vanhu vakasangana vakanaka nevakaipa. Vakaipa vanogumira kugehena, saka zvaizova nani kana vakagara vasina kuberekwa.
Vana vanokura voita vamwe vana. Vanhu vane simba rekuita kuda kwavo, saka hakuzovi nekuguma pakuita izvi. Pakupedzisira nyika inobva yazara zvakanyanya nevanhu.
Hupombwe, kurarama muzvivi, mimba dzevana vaduku, zvirwere zvepabonde, HIV Aids, kufeva, varanda vepabonde, kana kubata chibharo zvakabva zvapindirawo pakangoziviswa kusangana pabonde.
Saka rufu rwakabva rwapindawo pakatanga vanhu kuberekana nekusangana pabonde. Ichi ndicho chinhu chakaipa chikuru chakaunzwa nekusangana pabonde.
‘Kuita simba resarudzo’ zvaireva kuti Adamu nemukadzi vaizova nenhengo dzekusangana pabonde kuti vagosarudza nzira yakaipa kana vaida havo. Mazwi mazhinji ekutuka anoyanana nekusangana pabonde. Iyi yaive sarudzo yakaipa yakaitwa naAdamu naEva.
Mhuka yakazoshandurwa kuitwa nyoka yaive mhuka yepamusoro-soro yaive nemano kwazvo. Mhuka dzinorarama mubarika, apo murume mumwe anokwanisa kuva nehadzi zhinji. Mhuka dzinowanda nekusangana pabonde, nekuti chinhu chekuti Mwari aizodzima kana kwava nemhuka dzakakwana panyika, nekuti mhuka hadzigoni kuzvisarudzira. Dzinongorarama nekuda kwakaberekwa kuru madziri kunodzorwa naMwari.
Saka mhuka yakazoitwa nyoka, mhuka yepamusoro-soro, (yakazotukwa ikashanduka kuita nyoka) yaiziva pamusoro pekusangana pabonde, ikabva yaita hupombwe nemukadzi. Izvi zvakaparadza humhandara hwake, zvinosanganisa kurasa ropa. Chivi chakatanga nemhuka ichideura ropa. Saka Mwari aizoda kuti padeurwe ropa remhuka kuripira zvivi. Amagedhoni ndipo pachave nekudeuka kweropa zhinji kwemamaira 200 kune avo vakaramba havo Ropa reGwaiana.
Mumashure mechivi Mwari akaisa miganhu pamusoro pekusangana pabonde, kwaive kwava kutendera kwake, kwakavapo kuranga mukadzi. Aive ateerera mhuka, saka Mwari akaita kuti ararame nenzira yaive yakafanira mhuka, nzira yebarika. Murume mumwe aikwanisa kuita vakadzi vakawandisa. Izvi zvakadzikisira mukadzi. Akamurangawo nenzira yekurwadziwa pakubereka Mwana. Kurangaridzwa kuti aive aita sarudzo yakaipa.
Barika zvinoreva kuti murume aikwanisa kuroora vakadzi vakawanda zvaanoda. Aive asingafaniri kutanga arambana nemukadzi wake. Aitenderwa kuita vakadzi vazhinji. Asi mukadzi anofanira kuva mhandara paanoroorwa. Uku kuda kwaMwari- kunze kwekuti kana akafirwa-nekuti Eva aive asisiri mhandara paakadzoka kuna Adamu. Mukadzi asiri mhandara paanowanikwa anorangaridza Mwari pamusoro pechivi chekutanga. Murairo uyu haubati kumurume nekuti anogona kuroora atomboroora umwe kana vamwe vakadzi asati atora umwe.
Kuroora mukadzi mudiki kana kuti mutsva zvinokwanisa kuita kuti murume ashaye hanya nevamwe vakadzi vake, saka aizovaramba. Sanhasi, varume vemazera epakati nepakati vanoramba vakadzi vavo voroora vamwe vechidiki. Barika raive rakaomera munhukadzi, kuwedzera, kana murume akarasha mukadzi wake nekumuramba aizotora mukadzi mutsva kana achida hake. Izvi zvaive zvakaoma kurutivi rwemukadzi, saka Mosesi akatendera mukadzi akarambwa kuwanikwazve. Nyaya yese yekurambana iyi yaive yakaoma kwazvo. Kwaive kusina imwe nzira yekuigadzirisa, nekuti yaibva pamoyo yakaoma. Vairarama nemurairo wemhuka, saka zvaive zvakaoma kuita mirairo yakaoma yekukasika kumukadzi kana arambwa. Asi hwaive hupenyu hwakaoma uye hunonyangadza. Kuoma moyo kwaive kwakapindira munyaya dzekurambana, uye barika raive risiri kuda kwaMwari kwekutanga, saka Mwari aizoribvisa. Saka kuti mirairo irerukire mukadzi akarambwa waizova murairo wenguva duku. Murairo uyu wese waive wenguva duku waizobviswa nekuti murairo uyu waibva pahunhu hwevanhu hwakasviba mumashure mekupindira kwechivi. Murairo uyu waive wakafanana nekushandura ruvara rwechinhu chakaparara kare, chine moyo yevakadzi nevarume vakarasika.
Jesu akashandura chinhu chisina mufaro ichi zvakazara.
Dzokerai pakutanga. Murume mumwe mukadzi mumwe, mukadzi agove mhandara sezvaive mukadzi pakutanga. Wanano yaive chinhu chehupenyu hwese muhurongwa hwaMwari ndicho chikonzero nei Mwari akaita mukadzi mumwechete pakutanga.
Hurongwa hwepakutanga uhu hunoshanda chete pavanhu vakazvarwa patsva vane moyo yakashandurwa kuti ipfave semoyo yenyama. Kuwanana kwemurume nemukadzi mumwechete ari mhandara ndicho chinhu chimwechete chatinowana nhasi chingatiyananise nehurongwa hwaMwari hwekutanga hwemumunda weEdeni.
Kana vanhu vasati vazvarwa patsva vanomhanyira kuroorana nevanhu vasiri ivo, vozodemba pamusoro pesarudzo yavo. Vanobva vaoma moyo yavo, sezvo isu vanhu hazvisi nyore kwatiri kuti tisangane nenguva dzakaoma. Vanobva varambana.
Asi Magwaro akabuda pachena kuti havangapindi muwanano zvakare. Vese vari vaviri.
Jesu akadzosa wanano pahurongwa hwekutanga hwemumunda weEdeni, sezvazvaive chivi chisati chapindira. Maive musina chinhu chakaita sekurambama mumunda weEdeni. Adamu nemukadzi vaidanana nemoyo iri pachokwadi. Kunyangwe mukadzi paakaita hupombwe, Adamu aimuda zvekuti akamutora zvakare. Akatosarudza kutadza pamwechete naye, Kuti Mwari haaizomuparadza omuitira mumwe mukadzi. Edeni rinotidzidzisa pamusoro perudo rwechokwadi pakati pemurume nemukadzi pasina chinhu chinonzi kurambana.
Mumashure mekutadza, barika, kurambana nekuwanana zve zvakatenderwa pasi pemurairo. Kana muchida kurarama nenzira iyoyo, zvinosanganisa kuputsa sungano dzewanano dzenyu, munenge musingararame nenyasha asi nemurairo. Saka kuti muzviponese munofanira kuchengeta murairo wese zvawo. Izvi zvinorema kwatiri vanhu venyama, saka tinotozorasika.
Jesu akauya kuzotisunungura kubva pakutuka kwemurairo. Hapasisina kuoma moyo. Hakusisina kurambana. Hapasisina kuputsika kwesungano dzewanano. Saka hakuzovawo nekupinda mune dzimwe wanano. Murume mumwe anowanana nemukadzi mumwe vachiri kurarama. Ndiyo nzira yedu maKristu yewanano.
Pauro anoti kana muKristu akawanana neasiri muKristu vakava nemufaro pakugara vese vanofanira kugara havo. Apa munhu ari muwanano anenge agamuchira Ishe Jesu, asi mumwe wake anenge asina.
Pauro akati kana maKristu akawanana asingakwanisi kugara ese (zvichireva kuti mumwe wavo ari kurasikirwa nechipo chake chekuzvarwa patsva) vanofanira kuparadzana, asi votsvaga kugadziriswa. Kana vakasarudza kurambana, zvinenge zvareva kuti moyo yavo yakaomeswa. Kurambana kunobva chete pamoyo wakaoma. Kurambana hakurevi chinhu nekuti vose havazotenderwi kupinda zvakare mune dzimwe wanano.
Zvisinei, munyaya yekuti muKristu akawanana neasiri muKristu, asisadi kugara nemuKristu zvachose, regai asiri muKristu aende. MuKristu haana kusungirwa kugara naye iye achida hake kuenda.
Asi izvi hazviguri kana kuputsa sungano yewanano inova kusvikira vaparadzaniswa nerufu. Zvinongoreva kuti muKristu akasununguka kumurega achienda. Asi muKristu haachapinda zvakare muwanano.
I VAKORINTE 7:15 Zvino kana usingatendi achienda, ngaaende hake. Hama, kana iri murume kana mukadzi haisungwi nezvakadaro, asi Mwari wakakudanai kuti muve norugare.
1962 MIBVUNZO NEMHINDURO
Zvino 1 VaKorinte chitsauko 7, vhesi 15. Zvino, mubvunzo wavanobvunza: Hama Branham, izvi zvinoreva here kuti hama varume kana vakadzi vanotenderwa kupindazve mune dzimwe wanano here?
Kwete. Tarirai, hamuwani mubvunzo uyu ipapo nezvaari kutaura. Havana kusununguka kudaro. Tarirai, zvingazorwisa Magwaro, asi iwo Magwaro haazvirwisi zvachose.
Hamungariiti kuti rizvirwise. Saka verengai mavhesi aya neanotevera, ipapo munozobata kuti ari kutaura kuti kudii. Zvino, zvinoreva pano, kwete.... Mazviona?
Izvi zvinoreva here kuti hama mukadzi kana murume akasununguka kupinda mune imwe wanano zvakare?
Kwete, hama. Tarirai, akatsanangura izvi pekutanga:
… kune vakawana ndinovaraira, asi handizini, ndiShe, kuti Mukadzi arege kubva kumurume wake, kana achibva, ngaarege asingawanikwi, kana ayanane nomurume wake ....Mazvionaka?
Hakuna chinhu sechekuti mutendi anoyananiswa kuti apinde mune imwe wanano zvakare, iye waakasiyana naye ari mupenyu.
1962 BVUNZO NEMHINDURO
Hama munaShe, mukadzi kana murume, anokwanisa kuroora kana kuroorwa zvakasununguka, kana vakasiya vadikani vavo kuti vanopinda mune dzimwe wanano here?
Zvino, ngatitorei ... ngatitangirei pavhesi 10:
… Zvino vakawana ndinovaraira, asi handizini, ndiShe,...(Mazviona?)... mukadzi arege kubva kumurume wake: (Mazviona?)
Asi... kana achibva, ngaarege asingawanikwi, kana kuyananiswa nomurume wake: nomurume ngaarege kurasha mukadzi wake. (Ndiwo murairo waMwari. Mazviona?)
...asi kuna vose ndinoti, kwete Ishe: (Mazviona?)... kana hama iine mukadzi asingatendi,...
Zvino tarirai chinhu ichi. Mazviona? Munoramba muchiverenga musati masvika apa, muchaputa iyi yose munoona kuti vaifunga kuti “Kana ndikawana mukadzi aka... ndi...Ndikaroora ndikatendeuka, mukadzi wangu asiri mutendi, regai ndimurashe.” Oh, kwete. Handizvo hamugoni kuita izvi. Mazviona, muri kuzviona?
... kana chero hama ikaita mukadzi asingatendi, iye achifara kugara naye ngaasamurasha. (Zvinenge zvisiri nekuda kwewanano; asi nekuda kwekusatenda. “Hamuzowani” zvakare. Saka garai naye.
Kana mukadzi ane murume asingatendi, kana achifara kugara naye, ngaasamusiya. (Ndizvo chaizvo. Mazviona?)
Nokuti murume asingatendi anoitwa mutsvene nomukadzi wake, nomukadzi vo usingatendi unoitwa mutsvene nomurume wake: kana zvisina kudaro vana venyu vaiva netsvina; asi zvino vatsvene.
Asi kana asingatendi akabva, muregei aende...
Kana asingatendi akati, “Handichada kugara newe: wava muKristu.” Ku.. murume akaudza mukadzi wake, “Nekuti iwe watendeuka, waakubuda munyika mataiva, ndakukusiya.” Zvino, hapana zvaunogona kuzoita nezvazvo; musiye aende. Mazviona?
Kana kuti mukadzi anoti kumurume wake, “handikwanisi kuyanana nevanhu vatsvene avo. Handisi kuzoita izvozvo. Ndichabva kwauri ndokusiya.”
Iwe usasiye kereke, musiye aende. Mazviona?
Hama munaShe, mukadzi kana murume haana kusungwa mukuita uku, ndokunge kana mumwe wako ari ndiye ari kukusiya achienda. Hamungavabatiri. Kana vachida kuenda kubva kwamuri uye vachikusiyai nokuda kwaKristu, varegei vaende.
Asi hamukwanisi kupindazve muwanano.
“Asi Mwari vakatidana kurugare.” Mazviona?
Zvino, kwete kuti munogona kuwanikwazve:
Azvitaura kare, asi hamuna kusungwa kugara nemurume kana mukadzi asingatendi kana vasingadi.
Vaparidzi veMharidzo ava vanoti “Hatina kusungwa” vanoreva kuti “vakasununguka kupinda zvakare muwanano” vanoramba Magwaro ekuna Marko 10, vachirwisazve zvakataurwa nehama Branham. Sarudzo yatinoita yakakosha, nekuti nguva yekutambudzika yakamirira avo vakarasika panyaya iyi.
Hama Branham havana kutendera kuroora nekurambana.
Zaruriro yavaive nayo panyaya iyi ndeyekuti Mwari anotitonga nekuti tiri papi kana tasvika pachokwadi.
Saka vanhu vanorambana vachipinda zvakare muwanano mumasangano, vozosangana nechokwadi vanofanira kutangira pavanenge vari ipapo.
Kana vari muwanano nenzira yakaipa nekuti vakamborambana vakapinda mune dzimwe wanano, Mwari anovaregerera nekuti vaive vasina chavaiziva munguva yakadarika. Asi havafaniri kuzviita zvakare nguva inouya.
Vanhu vakabuda muwanano vasati vapinda mune dzimwe vakaziva chokwadi havachafaniri kupinda zvakare. Sungano dzavo dzewanano dzichiri dzakavasunga kuvadikani vavo vavakasiyana navo.
Kuna 1 VaKorinte, chitsauko 7, vhesi 12 ne 15, muchiporofita cheTestamente Itsva, Pauro, akasangana nechinhu chimwechete mukereke, akataura izvi, “Ndinoti ini, haazi Ishe.”ndizvo chaizvo? Nekuda kwenyaya yewanano.
“Zvaive zvakadaro kubva pakutanga.” Asi Mosesi akabvumidzwa, Mwari akazviona zvakanaka. Uye Pauro aivewo nekodzero, paakaona kereke iri mudambudziko rimwechete.
Pauro paakaita “tendero” yekuti zvisinei ndipo paaive akatarisana nezvaiitika muvanhu vatsva vaive vatendeuka. Kana vakauya kuchokwadi vabuda muwanano vakaroorazve, vanofanira kugara vakadaro.
Pauro haasi kuvapa mvumo yekuzorambana nekupinda zvakare mune dzimwe wanano munguva inouya.
Zvino munotenda kuti ichokwadi, motenda kuti zvakabva kuna Mwari! Nesimba regore rake neMharidzo yake yandisvitsa pano, Mwari pamusoro pemakomo haangatenderi here kuti ndiite zvimwechete, kuti ndikutenderei kuenda mberi muri zvamuri, musazozviiti zvakare!
Vanhu vakauya kuzogamuchira Mharidzo yehama Branham vakapiwa mukana mumwechete. Kana ukapinda muchokwadi, wakabuda kare mune imwe wanano ukapinda mune imwe ipapo unenge wakugona kuenderera mberi uri zvauri. Asi hakuna munhu anoziva chokwadi anotenderwa kurambana nekupinda zvakare mune imwe wanano.
“Sezvamuri” zvinoreva kuti kana makasangana nekuziva chokwadi mabuda muwanano munofanira kugara makadaro. Hamukwanisi kupinda mune imwe wanano.
Endai nevakadzi venyu munogara murugare, nekuti nguva yapera. Kuuya kwaShe kwaswedera. Hatina nguva yekuparadza zvinhu izvi. Musazviite zvakare! Ndiri kutaura nevanhu vakaungana pano chete. Asi kana makawanana... Mwari akandipupurira pana izvozvo, pagomo, kuti nditaure izvi, zaruriro inoshamisa, nekuda kwekuvhurwa kweZvisimbiso zvinomwe, uye mubvunzo muShoko raMwari. “Varegei vagare vari sezvavari, varege kuzotadza zvakare!”
Kana tikasvika pachokwadi Mwari anotitambira sezvatiri, kunyangwe kana takambopinda muwanano tikabuda tikapindazve. Asi kana takabuda muwanano nekuda kwekurambana, hatichafanira kuwana kana kuwanikwa zvakare.
“Kutendera” kwekuti zvisinei kwakaitwa naPauro nehama Branham kwaingova kwekuti vatambire vanhu vaive vari muchikamu chavaive vari, pavakaziva chokwadi. Izvi zvaivaregerera zvivi zvavo, nekuti vaive vasingazivi pakutanga.
Asi hazvina munhu akabvira apihwa mvumo yekudzokorora kutadza uku nguva yaizotevera.
Hakuna munhu akabuda muwanano mukadzi kana murume, vakaziva chokwadi vanokwanisa kupindazve muwanano. Nekuti sungano yewanano yakaitwa yakavasunga kuti kusvikira vaparadzaniswa nerufu.
1965 KUSARUDZA MUKADZI
Zvino kana zvemweya kana... zvekuberekwa zvakadaro zviri rudzi rwezvemweya. Zvino, kusarudza mukadzi, mune zvekuberekwa zvakadaro, rudzi rwekutsvaga Mukadzi, Mukadzi, munezvemweya.
Zvino, chinhu chakakosha kana tasvika pakutsvaga mukadzi, murume, nekuti sungano pano inoti kusvikira taparadzaniswa nerufu. Ndiyo nzira yatinofanira kuzvichengeta zviri. Uye munoita sungano iyi pamberi paMwari, kuti rufu bedzi ndirwo rwuchakuparadzanisai.
1957 VAHEBERU CHITSAUKO 6 2
Ndinogona kutiza ndikaenda nguva yese, ndichitenderera nenyika, ndomusiya achiita seachafa nenzara, kana chimwe chinhu, kusiya vana vasina chimwe chinhu chekudya; tichiri takaroorana. Kana akandiramba, ini ndichiri ndakaroora, kana mumuviri mangu muchiri nehupenyu chete. Zvinotora sungano iyi, “Kusvikira taparadzaniswa nerufu.” Ndizvo chaizvo. Tichiri takaroorana. Asi, zvakadaro, ndiri murume akaneta akaipa. Naiyewo anokwanisawo kuita mukadzi akaneta akaipa. Saka kana tichidanana, tinogara pamwechete totakura mutoro tiri pamwechete.
1965 02 20 MUTAMBO WEMUCHATO
Mwari wamasimba ose, Musiki mukuru wezvinhu zvose, muvambi wehupenyu husingagumi, mupi wezvipo zvose zvakanaka, kana imi makaona zvakakodzera kupa munhu chipo, mukamupa mukadzi. Zvakanyorwa, “Awana mukadzi, awana chinhu chakanaka”. Takamira pano masikati ano, mumashure mezviuru zvemakore, pfungwa dzedu dzadzoswa pakuitwa kwemutambo wekutanga, wakaitwa nemi, Baba, mumunda weEdeni, pamakawananisa baba naamai vedu, Adamu naEva, nanhasi munhu azviwanira mukadzi.
Baba, tinonamata kuti komborerai murume wechiduku uyu nemukadzi wechiduku uyu, vawana rudo mumoyo yavo, kuumwe neumwe wavo. Munguva yakaipa yatave kurarama, kurambana kwakawandisa, kusiyana mudzimba, ngazvisawire imba iyi. Dai vagara vachirangarira sungano iyi pese pavachararama! Ngakusave nechero simba ringavaparadze! Ndinonamata kwamuri Baba, sezvamakaropafadza Isaka naRabeka, mukavapa rufaro muhupenyu hwavo, vakabereka, tinonamata kuti muchaita zvimwechete kumurume uy nemukadzi wake, vabvumirana, vakataurirana vari pakavanda, zvino vauya kukereke nevanhu vose vari pano, kuti vape vimbiso dzavo, mumwe kune mumwe, saka vazviita vakazvizivisa pamberi peruzhinji.
1965 02 21 KUWANANA NEKURAMBANA
Ichi chinhu chikuru chakaipa kwazvo, handizivi kuti ndozviburitsa sei. Ndichaita sei, kana ndiine vakadzi nevarume vagere muboka rangu, vamwe vavo vakaroorwa kaviri kana katatu? Vakadzi vakanaka nevarume vakanaka vose vakasangana! Chii chakazviita? Dzidziso dzenhema, kusagona kumirira Mwari.
“Chabatanidzwa naMwari, ngakurege kuva nemunhu anoparadza.” kwete zvakasunganidzwa nemunhu; chabatanidzwa “naMwari” ! Kana mukaita zaruriro yakakwana kubva kuna Mwari, kuti uyu mukadzi wako, chinhu ichocho ndicho chako, kwehupenyu hwako hwose. Mazviona? Asi zvinobatanidzwa nevanhu chero munhu anokwanisa kuzviparadzanisa. Asi zvakaiswa pamwechete naMwari, hakuna munhu anoedza kubatapo. “Chese chabatanidzwa naMwari,” anoti “Ngakurege kuva nemunhu anoparadzanisa.” kwete zvakabatanidzwa nechero mumwewo mutongi wedare redzimhosva, kana mumwewo muparidzi ane tsumo nemadimikira zvakanyorwa mukabhuku, ava vanokwanisa kurega chero chinhu chichiitika panyika, Shoko raMwari riripo apo. Mazviona? Ndiri kutaura pamusoro pezvinobatanidzwa naMwari.
Kana vanhu vakawanana zviri pamurairo, sungano yavo yakasungwa kusvikira vaparadzaniswa nerufu. Havakwanisi kurambana vonoroora kana kuroorwa zve nevamwe. Kana umwe akaita chivi chakaipisisa, ipapo vanogona kusiyana asi vanenge vachiri vakaroorana mumaziso aMwari.
1965 -04 -29 KUSARUDZA MUKADZI
Zvino, kana zvemweya kana... zvinhu zvekuberekwa zviripo zviri nerudzi rwezvemweya. Ipapo, kusarudza mukadzi, mune zvakaberekwa zviripo, zvinova rudzi rwekusarudza Mukadzi, Mukadzi, munezvemweya. Zvino, chinhu chakakosha kana tasvika pakusarudza mukadzi, murume, nekuti sungano ndiyo kusvikira taparadzaniswa nerufu. Ndyo nzira yazvinofanira kugara zviri. Munoita sungano iyi pamberi paMwari, kuti rufu chete ndirwo rungakuparadzanisai.
Muna 1965 Hama Branham vaichatisa vanhu kana pasina akamboroorwa kumashura.
Doc akati, “ Mukoma wangu muparidzi, anokwanisa kukuchatisai.” akati, haabhadharisi vanhu kuita zvinhu zvakaita saizvozvo.”
Akati, “Ungamukumbira here kuti atichatise?”
Nokudaro manheru iwayo munun’una wangu akandibvunza. Ndikati, “kana asina kubvira amboroora, chero mumwe wavo kupinda muwanano, uye zvinhu zvavo zvose zvakamira zvakanaka.” Akati, ‘Ndichanomubvunza.” Ini ndikati, “Kana zvakadaro, muudze auye.”
1964- 08 -30 MIBVUNZO NEMHINDURO 3
Mubvunzo wakabvunzwa rimwe zuva, “kuchekesa muchato-kuchekesa muchato- kuchekesa muchato kwakafanana here nekurambana? Mazviona? Kana mukandibvunza mibvunzo iyoyo, hama, hamuzivi kuti zvinondiita sei. Ndine shamwari dzakawana dzakamboroora kana kuroorwa kaviri kana katatu. Muri kuziva here kuti ndiri kutaura nemwanakomana wangu, Billy Paul? Ndingamusiya sei Billy Paul? Kwete, hazvidaro. Billy Paul akaroora mumwe musikana, akauya, akati, “Baba, ndakuda kuroora.”
Ndaigeza motokari yangu; ndikati, “Rovera musoro wako kumadziro,” ndikaramba ndichisuka motokari yangu;
Akati, “Ndakuda kuroora.”
Akati, “Ndakati, “Oh, enda mberi,’ ndikaramba ndichiita zvandaiita. Akaenda akanoudza mai vake, mai vake vakamuseka. Munoziva kuti akaita sei? Akabva atiza neumwe mwana aive achiri kuchikoro vakanoroorana. Takachekesa muchato uyu baba vemusikana neni. Takachekesa muchato, asi vaive vatoroorana zvakadaro. Mwanakomana wangu agere pano akateerera izvozvi. Ndizvo chaizvo.
Akazouya kwanidiri nemusikana waari kugara naye izvozvi, muroora wangu. Kamuzukuru komana kangu... Akati, “Baba mungandichatisewo here?”
Ndakati, “Hazvigoni.” Mwanakomana wangu iyeye. Kufunga kwenyu hazvindimanikidzi here kana ndakamutakura nemavoko angu ndikaita zvose zvandaigona kuita, uye ndakava baba naamai kwaari? Kufunga kwenyu hazvindiurayi kutaura izvi? Asi ndicho chokwadi. Chokwadi chaicho. Mwanakomana wangu agere pano akateerera muroora wangu nemuzukuru wangu vakagarawo pano izvozvi... asi ndinomuudza kuti zvakaipa (Mazviona?) Nekuti ndinofanira kuvaudza. Ndakasungwa neShoko pabasa iroro.
1962 MIBUNZO NEMHINDURO
Asi zvino kungotaurawo, Ini... Hama Branham, ndakaroora mukadzi wangu haatendi, uye pano pane imwe hama munaShe uyo wandinogona kuroora.
Ndichasiya uyu ndoroora uyo.”
Oh, kwete. Kwete zvachose.
Sungano inoti kusvikira taparadzaniswa nerufu, hakuna chimwe panyika chingakutenderai kuroorazve muBhaibheri kusvikira mumwe wako afa. Ndizvo chaizvo.
Chinhu chega... hakuna kuroorazve kana kuroorwazve zvachose, kunze kwekunge mumwe wenyu afa. Ndizvo chete. Mazviona?
Zvisinei, pane chinhu chimwechete chete chinoita kuti sungano yemuchato isareva chinhu.
Mukadzi waAdamu paakaunzwa kwaari, aive mhandara. Mwari anoda chunhu ichi kumukadzi wese anoroorwa.
Kana asisiri mhandara, murume wake otadza kuziva chinhu ichi, uye haana kubvira areurura chinhu ichi vasati varoorana, ipapo anenge aita sungano yekunyepa uye murume anenge asina kusungwa nesungano yekunyepa iyi.
MATEO 5:32 Asi ini ndinoti kwamuri: Aninani anorasha mukadzi wake, asi nemhosva yovupombwe, unomuitisa vupombwe; ani nani unowana arashwa, unoita vupombwe.
1959 MIBVUNZO NEMHINDURO
40-187 Mukadzi akambouya kwete kare, akati “Oh, ndakareurura zvese izvozvo.” Aitya, uye achishungurudzika, akati, “ Ndakareurura zvese izvozvo kuna Mwari.” Ini ndikati, “unofanira kuzvireurura kumurume wako. Haasi Mwari wawakaitira vupombwe; wakaitira murume wako.” Ndizvo chaizvo.
Kana murume akaroora mukadzi akararama hupenyu husina kuchena asati aroorwa naye, iye ouya kumurume, kana vakange varoorana kwenguva refu, akauya kwaari akati, “Mudiwa, Ndoda kukuudza chimwe chinhu. Ndakambobuda neumwe murume; handina kubvira ndakuudza,” Jesu anoti murume ane mvumo yekumuramba oroora umwe, nekuti havana kuroorana kubva pakutanga,’ nekuti akamunyepera.
DEUTERONOMIO 22:13 Kana munhu akawana mukadzi akapinda kwaari, akazomuvenga,
14 akamupomera zvinonyadza, nokutaura zvakaipa pamusoro pake, achiti: ndakawana mukadzi uyu asi ndakati ndichiswedera kwaari, handina kuwana zviratidzo zvovumhandara bwake kwaari.
15 Zvino baba naamai vake vanofanira kuenda nezviratidzo zvovumhandara bwake kuvakuru veguta pasuvo;
(Ropa rakasara pajira pakaputsika humhandara hwake.)
16 Zvino baba vomusikana vanofanira kuti kuvakuru; Ndakapa murume uyu mwanasikana wangu, kuti ave mukadzi wake, asi zvino omuvenga.
17 Tarirai, wamupomera zvinhu zvinonyadza, achiti; handina kuwana zviratidzo zvevumhandara kumwanasikana wako, asi hezvi zviratidzo zvovumhandara bwomwanasikana wangu. Zvino vanofanira kuwarira nguvo pamberi pavakuru veguta.
18 Ipapo vakuru veguta iro vanofanira kubata murume uyo; vamurove:
19 Nokumuripisa mashekeri esirivheri ane zana, vagoapa baba vomusikana, nokuti wakataura zvakaipa pamusoro pomusikana weIsraeri; zvino iye anofanira kuva mukadzi wake, haangamurashe mazuva ake ose.
20 Asi kana riri shoko rezvokwadi, kuti zviratidzo zvehumhandara zvakashaikwa kumusikana,
21 Vanofanira kubuditsa musikana kumukova wemba yababa vake, varume veguta rake vagomutaka nemabwe, afe; nekuti wakaita sebenzi pakati paIsraeri. Pakupata kwake paimba yababa vake; saizvozvo anofanira kubvisa zvakaipa pakati pako.
22 Kana murume akawanikwa achivata nemukadzi akawanikwa nemurume wake, Ivavo vose vanofanira kuurawa, murume wakavata nomukadzi naiye mukadzivo. Saizvozvo iwe unofanira kubvisa zvakaipa pakati paIsraeri.
23 Kana kuno musikana achiri mhandara, wakanyengwa nemurume, mumwe murume akamuwana muguta akavata naye;
24 Ipapo munofanira kuvabuditsa vose vari vaviri pasuwo reguta mugovataka namabwe, vafe, musikana nokuti haana kuridza mhere, ari muguta hake, uyu murume, nokuti anyadzisa mukadzi wowokwake; saizvozvo iwe unofanira kubvisa zvakaipa pamusoro pako.
Murume anotanga kurara nemukadzi ndiye anomubvisa humhandara hwaakachengetedza kwehupenyu hwake hwese saka anenge amudzikisira. Izvi zvinopa murume kutonga pamusoro pemukadzi uyu. Kana ari murume wake, zvinobatsira mukadzi kuti atambire murume wake semusoro wake mutsva sezvo iye anenge achifanira kudzidzazve kuti abva pamasuwo ababa vake vakanga vari musoro wake kubvira kare.
Kana ari umwe murume akaita izvi kwaari kuita uku kunoita kuti aremekedze murume uyu saka, kana akawanikwa, anokwanisa kutadza kuremekedza murume wake semusoro wake. Kunyangwe akasaremekedza murume akatanga kurara naye, kuita kwekuti murume wake haasi iye akabvisa humhandara hwake kunotongoreva kuti haamuremekedze. Zvinogona kumuremera kuti aremekedze murume wake, kunyanya kana asina mweya wekuzvideredza.
Zvinobva zvaremera murume wake kuti amutarisire kunyanya kana akakwanisa kuziva zvakaitika muhupenyu hwake kare, anokwanisa kumuramba oroora mhandara ane mukana mukuru wekuzvideredza kwaari sezvo pasina umwe murume akapinda pakati pake nemurume wake.
Zvisinei kana mukadzi ane mhosva achinzwisisa achitarisira kumurume wake semusoro wake uye achizvipira kuzvininipisa kwaari, anokwanisa kumuregerera ogara naye.
Parizvino tine rimwe rimwechete zvobva zapera. Regai tione.
Hama Bill, ndeupi musiyano wehupombwe (munhu asati awanikwa oita zvebonde) nehupombwe hwekunge munhu awanikwa. Mateo 19:9
Jesu akati kuna Mateo 19:9 “Aninani unorasha mukadzi wake, asi nemhosva yehupombwe, akawana mumwe, unoita vupombwe, nounowana wakarashwa unoita vupombwe.” Musiyano wekuita uku, shoko rekuti vupombwe rinoshandiswa pese, asi kuti zvijeke zvaaitaura apa ndezvekuti, mukadzi asati aroorwa haatenderwi kuita zvepabonde haana murume wekuita naye uye wekuitira vupombwe. Kwaari tinoti akasviba. Anofanira kureurura izvi kumurume anoda kumuwana asati awanikwa kana akazviita. Akasataura, murume akazozviziva pamberi, ane mvumo yekumuramba, nekuti akaita sungano yekunyepa. Nekuti Bhaibheri rinoti, “ngazvi... kana kuti chivanhu chinoti, “ngazvizivikanwe kwamuri (ndinazvo mune rangu) chero vakaroorana vakabatanidzwa neimwe nzira isiri inotenderwa neShoko, wanano yavo haina kukomborerwa. Ndinoti kwamuri mose muchadaira pazuva reKutongwa apo zvakavanzika zvemoyo yese zvichabuda pachena, kana mose muchiziva zvakakunakirai madii mabatanidzwa zviri pamurairo, parizvino muri kuzvireurura here.” muripo. Mazviona?
Saka vupombwe hunoitwa nemusikana asata awanikwa ndiko kurarama zvisina kuchena uye anofanira kureurura kumurume anoda kumuwana asati awanikwa nekuti haana murume. Asi kana mukadzi aroorwa, akararama saizvozvo, anoitira murume wake vupombwe.
Kana munhurume akaita sungano yewanano yekuti kusvikira taparadzaniswa nerufu, vorambana oroorazve munhu iyeye anenge aine vakadzi vaviri. Izvi zvinomuisa pasi pemurairo. Asi murairo haugoni kumuponesa, saka kana achida kukunda kuenda kudenga anofanira kurarama asina chipomerwa, hakuna munhu anogona kuita izvi. Wanano yake yechipiri anenge achitoitira mukadzi wake hupombwe. Saka anenge ari padambudziko guru naMwari. Munhu mumwechete chete ndiye akagona kuchengeta murairo zvakazara, ndiJesu. Saka, zvichibva pamurairo anokwaisa kuroora vanhu vazhinji sekuda kwake. Ndiye ega munhu asingadi Muponesi. Nekuti wanano yake nesu ndeyepamweya, haisi yenyama, mukadzi wake anokwanisa kusanganisa varume nevakadzi vakazvarwa patsva.
Chivi chekutanga chakauya nekusangana pabonde. Ndiwo muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa.
‘Kuziva munhu’ ndiko kudaidzwa kunoitwa kusangana pabonde nemurairo.
Kusangana pabonde kwakaipa kunze kwewanano, uye kwananaka kana vanhu vakaroorana. Hakuna chimwe chinhu chakaita seichi. Nekuti tese takazvarwa kupfurikidza kusangana pabonde, tese tiri vatadzi tinoda kuponeswa.
Mwari anotendera vanhu kusangana pabonde mumashure mekuroorana, asi hahusi hurongwa hwake hwakarurama, asi hurongwa hwekutendera kwake. Muviri watakaberekwa nawo uyu wakatadza. Chiratidzo chechikara pamiviri yedu ndiro vanga remakuvhu edu. Adamu nemukadzi wake vaive vasingadi guvhu nekuti vakaberekwa pasina kutadza, saka vaisada rukuvhute. Rukuvhute rwaive rwakabatanidza iwe naamai vako. Ivowo vaive vakabatanidzwa naamai vavo, tichidzokera kusvika tasvika kuna Eva aive mai wavose vanorarama. Mutsetse murefu werukuvhute uyu mucherechedzo wehurongwa hwekutendera kwaMwari hwatakaberekwa tiri tese.
Jesu akazvarwa pasina kusangana pabonde. Akazvarwa nemhandara.
Rimwe zuva nguva inouya, paKuuya Kwake kweChipiri, achadaidza vatsvene vake kubva kuguruva renyika pakumutswa kwevakafa. Vatsvene vanenge vachiri kurarama vachashandurwa miviri yavo. Tichange tiripo tese mumiviri mitsva isingauye nekusangana pabonde.
Pakupedzisira, kusangana pabonde kuchabviswa zvachose.
Kusangana pabonde ingori nzira inowanda nayo hupenyu huzere zvivi. Ndicho chikonzero nei zvivi zvizhinji zvinosanganisa kusangana pabonde.
Kana munhu akaroora mukadzi mumwechete, Mwari anoona mubhedha wavo wakachena. Asi kutukwa kwatiri kana tikabuda mumiganhu iyi. Kuita uku kwese kunenge kwakaipa. Kusangana pabonde kunounza hupenyu hwenguva duku. Hakuna munhu akaberekwa nekusangana pabonde akamborarama kwemakore 1 000.
Kana wakambopinda muwanano kanodarika kamwechete munguva yakadarika, usati waziva chokwadi nekuti maifunga kuti zvinotenderwa, Mwari anokwanisa kukuregererai kana mukatendeuka pakutadza kwenyu. Asi kana mukazopindazve mune dzimwe wanano munguva inouya, kana kupa munhu zano rekupinda mune imwe wanano, munenge muri padambudziko. Mwari anoregerera chete zvinhu zvakaitika nekusaziva panyaya iyi yewanano.
Kana vanhu vakabuda vakapindazve muwanano, vanoedza kururamisira kutadza kwavo nekukurudzira vamwe kuti vaite zvakafanana naizvozvo, sezvo vachifunga kuti zvakanaka kana vanhu vazhinji vakazviitawo. Chenjerai vaparidzi vane dambudziko rekuroora vachiramba vakadzi muhupenyu hwavo. Vanogaroda kuzviyananisira, saka vanotendera kurambana nekupindazve muwanano. Chenjerai vaparidzi vanongoda kukudza masangano avo. Vanochatisa vanhu vakabuda muwanano nemufaro.